Aragtiwanaagsan.com – ku baro oo ka baro luuqadda ingiriisiga dugsiga Aqoonyahan ee Afka-ingiriisiga!!
ku baro oo ka baro luuqadda ingiriisiga dugsiga Aqoonyahan ee Afka-ingiriisiga!!
Dec 11, 2017 cabdicasiis mohamed Bogga Horumarka, Dhacdooyin, Qof Muhiim ah, Wararka, Waxbarasho 0
Dugsiga aqoonyahan ee Afka-ingiriisigu waa dugsi la aas aasay sanadkii 2012ka,waxana loo aas aasay in dadka luuqadda ingiriisiga doonaaya in ay bartaan ka caawiyo sidii ay u baran lahaayeen luuqad sax ah, oo ingiirisiya.dugsigu waxa uu dhigaa kooras 6 bilood ah,oo luuqadda ingiriisiga ah. waa kooras deg deg ah, oo kooban oo si xiiso leh lagu baro ardayga afka ingiriisiga.Dugsigu waxa uu ku yaalla magaalada hargeysa, gaar ahaan fooqa-Abco ee ku yaalla waqooyiga koonfureed ee Jeelka weyn ee hargeysa. dugsigu waxa uu xooga saaraa in ardaygu barto luuqad sax oo uu hadhow ku shaqo tago ama ku jid maro ama uu ku galo wareysi safaaradeed.hadaba,waxa maamulka dugsiga aqoonyahan ku wargalinayaa waalidka doonaaya in ay ubadkoodu dhigtaan luuqad sax ah,oo ingiriisiya in ay keenaan,dad kale ee iyaguna doonaaya in ay si fiican u bartaan ingiriisiga waxa uu leeyahay ku soo dhawaada dugsiga Aqoonyahan ee Afka-ingiriisiga!!!(We teach real English)!!
sawirqaadistii iyo isku dubaridkii: C.casiis maxamed yoonis(ansaari)
Maamulaha webka aragtiwanaagsan.com/office/hargeysa/Somaliland.
Daawo dugsiga Aqoonyahan ee Afka-ingiriisiga oo shahaadooyin ku sharfay Wasiirka Maaliyadda Somaliland ...Marwo Samsam!!! Daawo Warbixin raage oomaar ka diyaarshay Soomaliland oo noqonay wadankii u horeeyay afrika ee cidhibtira gudniinka fircooniga ah